Nodimandry I Manna Dey, Indiana Malaza Mpihira “Playback” Voarakitra Anatin’ny Tantara · Global Voices teny Malagasy
Nodimandry I Manna Dey, Indiana Malaza Mpihira “Playback” Voarakitra Anatin'ny Tantara
Voadika ny 01 Novambra 2013 12:28 GMT
Nodimandry noho ny fijanonan'ny fo tany Bangalore ny 24 Oktobra 2013 ilay Indiana malaza mpihira Manna Dey, izay teraka tamin'ny anarana Prabodh Chandra Dey. 94 taona izy io nodimandry io. Nirakitra hira maherin'ny 4.000 i Dey nandritra ny fotoana nanaovany zava-kanto ny 1942 ka hatramin'ny 2013, nalaza tamin'ny fanaovany “playback“, ny firaketany hira “playback” hirain'ireo mpandray anjara tany anatin'ny horonantsary an-jatony.
Tamin'ny teny Hindi sy Bengali no tena nihiràny, fa mandraindray ireo hira Indiana hafa ihany koa izy. Samy nampalaza io mpihira io na tany Inde na tany Bangladesh.
Nitety ny fahatsiarovana azy ireo mpampiasa aterineto, taorian'ny nahafatesany.
Nahatadidy azy i Venkataramanan Ramasethu, akademisiana sady mpitoraka bilaogy:
Olona iray malaza voarakitra an-tantara sy manam-pahaizana ara-javakanto tamin'ny zony manokana izay nanjaka tamin'ny kianjan-javakanton'ny Bollywood tanatin'ny 40 taona teo ho eo, indraindray aho nahatsapa hoe mahery fo tsy be mpahalala izy.
Namoaka zavatra 10 tsy be mpahafantatra momba io mpihira malaza voarakitra an-tantara io i Akash Upadhyay .
Nanamarika i Reema Moudgil, sady mpanolotra fandaharana amin'ny onjam-peo no mpanoratra ary koa mpitoraka bilaogy:
Hira marobe. Dika marobe avy aminà feo iray, izay feo miavaka.
Naneho an'isa ny asan'i Manna Dey i India Today (@IndiaToday):
Mandrià am-piadanana ry Manna Dey! Fiangaliana ny zava-kanto an'isa maro pic.twitter.com/bJfqv8I0Hb
— India Today (@IndiaToday) 24 Oktobra 2013
Nanoratra lahatsoratra iray fanomezam-boninahitra an'i Manna Dey ny mpanoratra sady mpitoraka bilaogy Madhulika Liddle:
Ireto no zavatra tiako sy deraiko mikasika an'i Manna Dey: ny fahaizany mizatra amin-javatra iray, ny halehiben'ny karazan-kirany, ny fahaizany mandraikitra fihetseham-po marobe anatin'ireo hirany—na ny fitiavan-tanindrazana latsam-paka anatin'olona iray izany fihetseham-po izany, na miteraka alahelo, na koa tsy firaharahiana lalina. Avy amin'ny iray amin'ireo hiran'izany lehilahy izany no nakana ny anaran'ilay fitambaranà trano fisakafoana (Bhojohorimanna).
Vanim-potoana iray no lasa. Nodimandry i Manna Dey, farany tamin'ireo lehilahy mpihira “playback” mahay indrindra taorian'ireo taona volamena. Ny feony kosa anefa, hanohy hiaina, ary ho fampiononana kely izany. Kely.
Nahazo ny Padma Bhushan i Manna Dey, mariboninahitry fahatelo avo indrindra fanome olon-tsotra, tamin'ny 2005. Sary an'i D Chakrabarty. Fizakà-manana Demotix (24/10/2013)
Nitantara hira iray malaza an'i Manna Dey ny mpanao gazety Abhinay Dey, hira iray nalaza teny anivon'ireo Bengali izay mitantara ny fiainanà mpinamana fito nihaona matetika tao amin'ilay Trano fisotroana kafe iray malaza any amin'ny araben'ny Anjerimanontolon'i Kolkata. Manana lanjany ara-tantara io Trano Fisotroana io noho izy toerana fihaonan'ireo manam-pahaizana, tonian-dahatsoratra, mpanakanto ary mpanoratra monina ao Kolkata:
Ny hira nosoratan'i Gauriprasanna Majumdar dia mitantara ny tontolo andron'ireo mpinamana fito tany amin'ny Trano fisotroana Kafe, izay nipetraka voahodidina kaopy tsy mety lany sy sigara charminar mora vidy midorehitra eny anelanelan'ny molotr'izy ireo sady mandrevy ny hanao zava-dehibe.
Saingy naka ny anjarany tamin'izy ireo ny fiainana, efa maty i DSouza, ary an-dàlam-pahafatesana noho ny homamiadana i Amal, i Rama anatinà toby ho an'ny marary saina noho ny famadihan'ny olon-tiany azy, Sujata nanambady lehilahy mpanarivo, Nikhilesh any Parisy ary i Moidul kosa niverina ao Dhaka. Ilay namana fahafito dia ilay mpanoratra tsy nitonona anarana manimanina ireo andro tsy nisy naha-ory tao amin'io Trano fisotroana Kafe io.
Tsy misy fotoana tsy hahatsapako kenda rehefa maheno io hira io aho. Mahatonga anao ho faty miaraka amin'i DSouza, mpitendry gitaran'ny Grand Hotel, ny feony, mahatonga anao hijaly toa an'i Amal, ilay poeta tsy tafita, mahatonga anao ho lasam-borona tahaka an'ilay adala Rama, ilay tsy ampy fitiavana sady mpilalao horonantsary tsy tafita.
Nalaza ihany koa izy tao Bangladesh. Nanoratra ny mpitoraka bilaogy Professor Hijibijbij tao amin'ny Sachalayatan:
Akaiky ahy ireo hiran'i Manna Dey fony fahatanorako. Mbola manaraka ahy izy ireo. Tamin'izany fotoana dia nihaino ny hirany isanandro aho. Rehefa nandeha teny ny andro dia nahafantatra hirany maro hafa aho. Hira tahaka ireo teny mitohitohy nozairina tamin'ny feon-kira, izay naneho ny fihetseham-poko miafina tao anaty. Mbola mihaino ny hirany anatinà fitaovana fandefasana K7 tranainy aho. Mihaino, mihaino, mihaino azy ireo hatrany aho, nefa tsy mety lany manja izany.
Nitoraka bitsika ny mpitoraka blaogy Zuberino (@zuberino) ao Bangladesh:
Ny fanomezam-boninahitra tsara indrindra ho an'i #MannaDey dia ny fihainoana ny hirany tsy mety maty http://t.co/vWv9zzI5lT
— zuberino (@zuberino) 25 Oktobra 2013
Nitatitra i Harini Calamur (@calamur), Indiana mpanoratra sady mpitoraka bilaogy :
Manome voninahitra an'i Manna Dey ireo mpankafy azy ao amin'ny Twitter; miparitaka amin'ny tenifototra #MannaDey ny lisitr'ireo hirany nangonina avy eny amin'ny vahoaka http://t.co/f3TgtvEBEc
— Harini Calamur (@calamur) 24 Oktobra 2013
Anuradha Warrier, mpanoratra sady mpitoraka bilaogy, nirakitra hira maro malaza an'i Manna Dey ho fanomezam-boninahitra azy.
Nahatsiaro azy i Amitabh Bachchan (@SrBachchan), mpilalao horonantsary sady mpanolotra fandaharana ao Bollywood:
T 1200 -Andro tsy feno .. raha tsy mahatsiaro an'i Manna Dey anatinà iray minitra fahanginana ..gina tsy nisy feo..tafiotranà feo miovaova maro no nafoy !
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 24 Oktobra 2013